असार ३, २०७५ आइतवार ०६:००:००
शरीरको वृद्धि, विकास र सञ्चालनका लागि चाहिने सूक्ष्म तत्वलाई भिटामिन भनिन्छ। भिटामिन धेरै प्रकारका हुन्छन्। तीमध्ये भिटामिन डी पनि एक हो। क्याल्सियम र हड्डीसँग बढी परस्पर सम्बन्ध मानिएको भिटामिन डी शरीरका विभिन्न अंगका लागि महत्वपूर्ण रहेको विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेका छन्।...
असार १, २०७५ शुक्रवार ०९:५५:१७
राजधानीको एक कलेजमा स्नातक तहमा अध्ययनरत २१ वर्षीया युवतीले २ वर्षअघि कक्षामा पढिरहेको समयमा अनौठो अनुभूति गरिन् । अचानक छाति चिसो भएर आयो । तत्काल त्यति वास्ता गरिनन् । तर छाति भिज्ने क्रम बढ्दै थियो । घरमा आएर हेर्दा स्तनबाट दूध चुहिएको थियो । सुरुमा अनौठो लागेपनि ...
जेठ २९, २०७५ मगलवार ०६:००:००
मुलुककै जेठो वीर अस्पतालले हालै छातीका विभिन्न रोगको निदानका लागि अत्याधुनिक प्रविधिसहितको एन्डोब्रोन्कियल अल्ट्रासाउन्ड (इ–बस) मेसिन प्रयोगमा ल्याएको छ। चिकित्सा इतिहासलाई नियाल्ने हो भने जर्मनीका चिकित्सक क्रस्निक र विल्मानले सन् २००३ मा पहिलो पटक इ–...
यस्ता छन् नृत्यले बच्चा, युवा र वृद्ध शरीरमा गर्ने फाइदा
जेठ २७, २०७५ आइतवार ०६:००:००
लयबद्ध तरिकाले संगीतको तालमा गरिने शारीरिक क्रियाकलाप हो नृत्य। मनोरञ्जनका रुपमा हेरिने नृत्यमा स्वास्थ्यलाई सकारात्मक असर गर्ने गुण हुन्छ। शरीर, मन र भावनाको त्रिगुणात्मक संयोग हुने यो कलाले स्वस्थ बनाइराख्न भूमिका खेल्छ। नृत्यका फाइदा - शारीरिक, मानसिक र भाव...
जेठ २६, २०७५ शनिवार ०६:००:००
भिटामिन डि हाम्रो शरीरको लागि अत्यावस्यक भिटामिनहरु मध्ये एक हो । भिटामिन डि को मुख्य स्रोत भनेको सूर्यको किरण नै हो। सूर्यको किरणमा भएको अल्ट्रा भायोलेट किरणको मद्धतले हाम्रो छालाले भिटामिन डि बनाउँछ। यसको अर्को स्रोत भनेको माछा, अण्डा, दूध , च्याउ, कोड लिवर ते...
काने केलोइड र यसको उपचार
जेठ १८, २०७५ शुक्रवार ०९:२६:४७
खत वा दाग मानव शरीरको जुनसुकै भागमा देखिन सक्छ । शरीरमा कुनै चोटपटक लागेको घाउ पुरिने क्रममा त्यस्ता खत वा दाग देखा पर्ने गर्छ । त्यस्ता खत वा दाग विशेषगरी राम्रा र नराम्रा गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । यसलाई नै मेडिकल भाषामा केलोइड भनिन्छ । यस्तो दागले कुरूप देखाउन सक्छ...
जेठ १७, २०७५ बिहिवार १६:३७:२८
मानिसको व्यक्तित्व जान्न उसको पोशाक, बोली र व्यवहार हेरेरमात्र पुग्दैन । उसले हाँस्दा, बोल्दा देखिने दाँत, फेर्ने सासले समेत व्यक्तित्वमा प्रभाव पार्छ । बोल्न थाल्दा सास गन्हायो, हाँस्दा दाँतभरी लेउ, फोहोर देखियो भने हामी सकेसम्म त्यस्ता व्यक्तिको वरिपरि नै पर्न चाहँदैनौं ।&nb...
जेठ १६, २०७५ बुधवार १३:३१:५६
स्तन क्यान्सर महिलहरुमा हुने क्यान्सरमध्ये दोस्रो सबैभन्दा बढी हुने क्यान्सर हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुसार पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सर नेपाली महिलामा हुने क्यान्सरमध्ये सबैभन्दा बढी हुने क्यान्सर हो। नेपालमा देखापर्ने स्तन क्यान्सरका बिरामीमध्ये एक चौथाइ कम ...
जेठ १२, २०७५ शनिवार ०८:४५:४०
हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो दाँतको बाहिरी भागलाई इनामेल भनिन्छ। इनामेलभन्दा भित्रको भाग डेन्टिन हो। सबैभन्दा भित्रको भागलाई पल्प भनिन्छ। विभिन्न कारणबस इनामेल खिइँदा डेन्टिन देखिन्छ र सिरिङ–सिरिङ हुन्छ। डेन्टिनमा रहने नशाहरु संवेदनशिल हुन्छन्। ...
जेठ ११, २०७५ शुक्रवार ०९:१२:०३
के हो थाइराइड परीक्षण ? शरीरमा थाइराइडको समस्या भए नभएको पत्ता लगाउन प्रयोगशालामा गएर जाँच गरिने प्रक्रियालाई थाइराइड परीक्षण भनिन्छ । विगत केही समययता मानिसहरु थाइराइडको समस्या परीक्षण गर्न प्रयोगशालामा आउने क्रम बढ्दै गइरहेको छ । समयमै आवश्यक परीक्षण गरेर सतर्कता अप...
जेठ ११, २०७५ शुक्रवार ०६:४२:२१
थाइराइड के हो ? शरीरको मेटाबोलिजम अर्थात् खानालाई शक्तिमा परिणत गर्ने प्रक्रिया नियन्त्रण गर्न थाइराइड हर्मोन आवश्यक पर्छ। थाइराइड रोग होइन। यो हाम्रो घाँटीमा हुने ग्रन्थी हो। यसले टी ३ र टी ४ नामक हर्माेन बनाउँछ। यो हर्मोनले शरीरलाई चाहिने तत्व विभिन्न अंग, कोश...
भारतमा फैलिएको निपा भाइरस नेपालमा संक्रमण हुने सम्भावना कति?
जेठ ९, २०७५ बुधवार ०८:२९:०५
हुनत यो प्रश्न गर्न नपाउँदै धेरैले छैन वा प्रमाणित भएको छैन भन्ने उत्तर दिनेछन्, जुन अस्वाभाविक पनि होइन। तर यसलाई यसरी पनि सोचौँ। यो भाइरस मलेसियामा पहिलोपटक सन् १९९८ तिर थाहा भएको, सुंगुरको प्रतक्ष्य सम्पर्कमा आहेका (खासगरी किसानहरु) वा आउनेलाई सरेको, छिम...
आर्थराइटिसको समस्यामा के गर्ने, के नगर्ने?
जेठ ४, २०७५ शुक्रवार १६:४६:५७
सामान्य भाषामा हड्डी टुटफुट हुने समस्यालार्इ आर्थराइटिस भनिन्छ । यसलार्इ वृद्धावस्थामा हुने दीर्घरोग भन्ने गरिन्छ। सामान्य रुपमा यो रोगले घुँडा, कम्मर, गर्दन तथा मेरुदण्डमा बढी समस्या निम्त्याउँछ। करिब ५० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका व्यक्तिहरु यो समस्याबाट बढी ग्रसित हुन्छन्। य...
जेठ ३, २०७५ बिहिवार १४:३५:२२
मुटुबाट रक्तसञ्चार हुने बेलामा रक्तनली (आर्टरी ) को भित्तामा पर्ने दबाबलाई रक्तचापभनिन्छ । रक्तचापलाइ मिलिमिटर अफ मर्करीमा नापिन्छ । माथिको रक्तचापलाई सिस्टोलिक र तलको रक्तचापलाई डायस्टोलिक भनिनछ । सिस्टोलिक र डायस्टालिक दुबै रक्तचापशरीरको लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण मान...
बैशाख २३, २०७५ आइतवार ०७:१५:०६
स्वस्थ भएर बाँच्न पाउनु हरेक मानवको जन्मसिद्ध अधिकार हो। प्रकृतिले स्वस्थ भएर बाँच्न सबै व्यवस्था मिलाएको छ । तर, हाम्रै अज्ञानताले गर्दा हामी रोगको शिकार भइरहेका छौं। हामी प्रकृतिसँग जति टाढा हुन्छौं, त्यति रोगको शिकार हुन्छौं। हाम्रो दिनचर्या जति प्रकृतिको नियमसंगत् हुन्छ ...
बैशाख २२, २०७५ शनिवार १०:३१:४६
हालै गरेको एक अनुसन्धानको नतिजाले नेपालमा कालाज्वरो हिमालमा (डोल्पा) पुगेको प्रमाणित भएको छ। यो आफैँमा अति दुर्लभ घटना हो। सन् २०११ मा यो पहिलोपल्ट कालाज्वरो तराईबाट पहाडतिर फैलिँदै गएको अनुसन्धान लेख प्रकाशित गरेको थिएँ । धेरैले विश्वास गरेका थिएनन् । तर त्यसयता न...
बैशाख १९, २०७५ बुधवार ०८:५९:५२
महिलामा भन्दा पुरुषमा मिर्गौला तथा पित्तशयको समस्या बढी देखिन्छ । मौसम, पिसाबनलीमा हुने संक्रमण, वंशाणुगतजस्ता कारणले यो समस्या निम्तिने भए पनि खानपानले समेत ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । घाममा बढी समय काम गर्दा पसिना निस्कने हुन्छ । साथै गर्मी मौसममा पानी कम पिउँ...